» Dr. Sheek Muhammad Rashaad: Sheeka keenya guddaa kan uumamaan hayyuu ---- Gadaa.com Oduu – News
Bitootessa/March 1, 2013 · Gadaa.com Kan barreesse: Najiib Zannuun*
* Najiib Zannuun: marsimoonaa@yahoo.com
1 Comment	Shanshuu said,
April 7, 2013 @ 2:34 am
Dr.sheik Muhammadrashaad umrii nanaa dheeradhu. Inni nama qubee ammaan kana itti barreessaa jiruu nuuf uume.Seenaan dhokachuu hin qabdu. Dhabbanni Radiyoo fi tv Oromia sunilleeb ragas isaaf bahuun madaaliyaa warqii fi xalayaa ragaa badhaasee ture. Garuu warreen biroo isa maaf dhossan? Maa ragaa bahuufii didan? Long live Dr. Muhammadrashaad Abdullee